The Ninth Gate (1999) | MM Movie Store
အတတျပညာတဈခုကို တဈဘကျကမျးခတျ တတျမွောကျသှားသူကို ဝိဇ်ဇာလို့ ချေါတယျ ။ဘာသာရေးအရ သာမနျလူတှေ မလုပျနိုငျတဲ့ ဂမ်ဘီရအတတျပညာတဈခြို့ကို တဈဘကျကမျးခတျ တတျမွောကျပွီး အရှငျထှကျ အသထှေကျနဲ့ နောငျပှငျ့မယျ့ဘုရားဖူးဖို့ လှတျမွောကျရာလမျးလို့ ချေါတဲ့ ထှကျရပျလမျးကို ရောကျသှားတာတှရှေိတယျ ။
သူတို့ကို ထှကျရပျပါကျ ပုဂ်ဂိုလျလို့ ချေါတယျ ။ထှကျရပျပေါကျ ပုဂ်ဂိုလျတှကေို ဝိဇ်ဇာလို့လညျး ချေါကွသေးတယျ ။ဝိဇ်ဇာပေါငျး ရှဈသောငျးလေးထောငျရှိတဲ့အထဲ ကြှနျတျောတို့သိတာ ပွဒါးဝိဇ်ဇာ ၊ သံဝိဇ်ဇာ ၊ အငျးဝိဇ်ဇာ ၊ ဆေးဝိဇ်ဇာ စသဖွငျ့ နညျးနညျးပါးပါးပဲ သိကွတာပဲ ရှိသေးတယျ ။
ထားတော့ …. ဝိဇ်ဇာအကွောငျးဆကျရှငျးနရေငျ ကိုယျတိုငျတောငျ အဂ်ဂိရတျ ထထိုးနရေမယျ ။ဒီရုပျရှငျကတော့ နဝမမွောကျ တံခါးကနေ ထှကျရပျလိုငျးကို လြှောကျလမျးမယျ့ စာအုပျဝိဇ်ဇာပဲ ဖွဈပါတယျ ။
ဂမ်ဘီရအတတျပညာတဈခြို့ကို စိတျဝငျစားရငျ ကွညျ့ကွပေါ့ဗြာ …….ps. အထူးပွောစရာမလိုတာကတော့ Pirates of the Caribbean မငျးသား Johnny Depp ခေါငျးဆောငျသရုပျဆောငျ ထားတယျဆိုတာပါပဲ……
အတတ်ပညာတစ်ခုကို တစ်ဘက်ကမ်းခတ် တတ်မြောက်သွားသူကို ဝိဇ္ဇာလို့ ခေါ်တယ် ။ဘာသာရေးအရ သာမန်လူတွေ မလုပ်နိုင်တဲ့ ဂမ္ဘီရအတတ်ပညာတစ်ချို့ကို တစ်ဘက်ကမ်းခတ် တတ်မြောက်ပြီး အရှင်ထွက် အသေထွက်နဲ့ နောင်ပွင့်မယ့်ဘုရားဖူးဖို့ လွတ်မြောက်ရာလမ်းလို့ ခေါ်တဲ့ ထွက်ရပ်လမ်းကို ရောက်သွားတာတွေရှိတယ် ။
သူတို့ကို ထွက်ရပ်ပါက် ပုဂ္ဂိုလ်လို့ ခေါ်တယ် ။ထွက်ရပ်ပေါက် ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ဝိဇ္ဇာလို့လည်း ခေါ်ကြသေးတယ် ။ဝိဇ္ဇာပေါင်း ရှစ်သောင်းလေးထောင်ရှိတဲ့အထဲ ကျွန်တော်တို့သိတာ ပြဒါးဝိဇ္ဇာ ၊ သံဝိဇ္ဇာ ၊ အင်းဝိဇ္ဇာ ၊ ဆေးဝိဇ္ဇာ စသဖြင့် နည်းနည်းပါးပါးပဲ သိကြတာပဲ ရှိသေးတယ် ။
ထားတော့ …. ဝိဇ္ဇာအကြောင်းဆက်ရှင်းနေရင် ကိုယ်တိုင်တောင် အဂ္ဂိရတ် ထထိုးနေရမယ် ။ဒီရုပ်ရှင်ကတော့ နဝမမြောက် တံခါးကနေ ထွက်ရပ်လိုင်းကို လျှောက်လမ်းမယ့် စာအုပ်ဝိဇ္ဇာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဂမ္ဘီရအတတ်ပညာတစ်ချို့ကို စိတ်ဝင်စားရင် ကြည့်ကြပေါ့ဗျာ …….ps. အထူးပြောစရာမလိုတာကတော့ Pirates of the Caribbean မင်းသား Johnny Depp ခေါင်းဆောင်သရုပ်ဆောင် ထားတယ်ဆိုတာပါပဲ……